🥇 Cecofry Cecotec Saliid Fryers bilaash ah ▷ TOP 4 ee 2022
Cecotec Cecofry Saliid Fryers bilaash ah
La cusbooneysiiyay: 03/2021
Soo hel shirkadda Isbaanish Cecotec iyo baaxaddeeda cecofri oo leh qaar ka mid ah Saliibado saliid la'aan ah ugu badan ee lagu iibiyo dalkeena. Waxaan falanqeyneynaa moodooyinkooda ugu fiican si aad u heshid fryer-ka cuntada badan leh ee ku habboon baahiyaha gurigaaga qiimaha ugu fiican online.
Waxaan kuu sheegaynaa wax walba: Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada, Tilmaamaha, qalabka iyo qalabyada lagu daray, qiimaha Spain iyo the fikradaha isticmaalayaasha kuwaas oo isku dayay. Waxba ha seegin!
➤ Isbarbardhigga Fryers-ka Cecofry ugu Fiican
Is barbar dhig muuqaal astaamaha ugu muhiimsan mid ka mid ah moodooyinka ugu fiican ee hadda jira suuqa.
Qiimaha Tayada ugu Fiican
9 litir (x2 qaybood)
2 Goobaha wax lagu kariyo
Waa maxay Fryer Saliida Cecotec ee bilaashka ah si aad u iibsato?
Inkasta oo ay dhawr sano suuq geeyeen dhowr nooc, hadda saddexda ugu caansan waa:
Awoodda: 3 litir
Barnaamijyada la heli karo: 8
Nidaamka: Korka Sare
Daab Wareegaya: Haa
Aagagga karinta: 2
Makiinada weelka lagu dhaqo badbaado leh: Haa
Waxaan wajahaynaa shiilan aan saliid lahayn aad u dhamaystiran oo leh tilmaamo gaar ah, sida labada aagagga kulaylka ee madaxbannaan. Waa qaabka ugu fiican ee kuwa raadinaya inta badan ujeedooyin badan si aad maalin kasta uga faa'iidaysato dhammaan noocyada cuntooyinka.
Waxaad ka arki kartaa dhammaan faahfaahinta qalabkan xiriirkan Cecotec Cecofry Turbo 4D. Halkan waxaa ah qoraal kooban oo ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan, labadaba togan iyo kuwa taban.
Jikada laba heer
2 aagagga kulaylka ee madaxbannaan
8 Barnaamijyada Preset
Aad u kala duwan
Jawaab celinta isticmaale togan
Ku qas dhadhanka 2 1 qaab
Cecofry Deluxe Degdeg ah
*Ogeysiis: Qaabkan hadda lama heli karo.
Eeg Qiimaha Degdegga ah ee Delux
Fryer-cunto oo kuu ogolaanaysa inaad ku karsato hal qaado oo saliid ah, adigoo helaya natiijooyin caafimaad leh. Weelkeeda awoodda 2,5 L ayaa kuu oggolaanaya inaad kariso cunto tiro badan.
Labada dambiisha iyo rafcaanku waxay leeyihiin dahaar aan dhejis ahayn waxayna ku habboon yihiin weelka dhaqda.
1400 W oo awood ah si aad si dhakhso ah u kariso dhammaan suxuunta. Natiijooyinka aan caadiga ahayn ee dhammaan cuntooyinka waxaa mahad leh tignoolajiyada PerfectCook ee hawada kulul ee ku wareegta gudaha kana soo baxda godadka dambe.
Naqshad casri ah oo cufan oo leh muraayad dhijitaal ah oo kor ku xusan si loo xakameeyo hawlgalka.
8 habab hore loo diyaariyey oo dejiya wakhtiga iyo heerkulka loo baahan yahay si loo kariyo noocyada kala duwan ee cuntada. Waxay leedahay heerkulbeeg heerkulbeeg ah si uu u xakameeyo heerkulka laga bilaabo 80ºC ilaa 200ºC.
Dukaanka Cecotec Eeg heshiiska
Awoodda: 2,5 litir
Awooda: 1400 W
Daab Wareegaya: Maya
Aagagga karinta: 1
La bilaabay 2020 sida a horumarka isafgaradka degdega ah taas oo kordhisa awoodda hal litir oo dheeraad ah oo ay ku darayso guddi dhijitaal ah oo leh 8 barnaamij oo hore loo duubay. Marka laga reebo barnaamijyadan, waad awoodaa deji heerkulka iyo waqtiga sida aad ugu baahan tahay cuntooyin kale oo badan.
Sida walaasheeda yar, waxay ku daraysaa tignoolajiyada cunto karis fiican, kaas oo isku dayaya inuu hagaajiyo wareegga hawada kulul si loo kariyo si siman. Si loo nadiifiyo si fudud, rafcaanka la rari karo iyo dambiisha waa kuwo aan dhejisnayn oo waxay noqon karaan geli makiinada weelka dhaqda.
Nadiifinta weelka weelka
Koontaroolada dhijitaalka ah oo leh 8 barnaamij
Laba midab ayaa diyaar ah, madow iyo caddaan
Waxay u baahan tahay walaaqa cuntada
Cecotec Compact Degdeg ah
Eeg Qiimaha Degdegga ah ee Is haysta
Fryer-cunto oo kuu ogolaanaysa inaad ku karsato hal qaado oo saliid ah, adigoo helaya natiijooyin caafimaad leh. Natiijooyin aan fiicneyn oo ku jira dhammaan cuntooyinka cuntada waxaa mahad leh PerfectCook tignoolajiyada hawada kulul.
Waxaa ku jira dambiil Karso ilaa 400 garaam oo baradho ah hal mar. Programmeable in wakhtiga iyo heerkulka.
Waxay leedahay heerkulbeeg ilaa 200ºC ah. Waqtiga la isku hagaajin karo laga bilaabo 0 ilaa 30 daqiiqo.
1,5 litir weel.
Waxa ku jira buug-cunto-karin dhammaystiran.
Awoodda: 1,5 litir
Barnaamijyada la heli karo: 0
Makiinada weel ammaan ah: ND
Waa qaabka dhaqaale ee ay bilawday shirkadda Isbaanishka si ay ugu tartanto 2019 qalabyo kale oo leh nidaamka khaanadaha. waa a qalab is haysta iyo user-saaxiibtinimo ku fiican lamaanaha ama keligood raadinaya hawo kulul oo raqiis ah.
Halkan waxaad ka heli kartaa waxyaabaha ugu muhiimsan, laakiin sidoo kale waxaan ku haynaa si faahfaahsan loogu lafa guray xidhiidhkan: Degdeg ah oo is haysta
➤ Shiilanyada Saliida Cecotec kale
Marka lagu daro kuwa kor ku xusan, calaamaddu waxay iibisay laba qalab kuwaas oo hadda si ficil ah u baxsan. Ilaa aad ka hesho soo jeedin wakhtiga saxda ah mooyaane, hadda uma qalmaan.
Cecotec Cecofry Muhiimka ah
Eeg Qiimaha Cecofry
Fryer-ka cuntada ee kuu ogolaanaya inaad ku karsato hal qaado oo saliid ah, taasoo ku gaareysa natiijooyin caafimaad leh.
Awood 2,5L oo baaldi ah oo lagu kariyo tiro badan oo cunto ah. 1200 W oo awood ah si aad si dhakhso ah u kariso dhammaan suxuunta. Natiijooyin aan fiicneyn oo ku saabsan dhammaan cuntooyinka waxaa mahad leh tignoolajiyada PerfectCook ee hawada kulul ee ku wareegta gudaha oo ka soo baxda godadka dambe.
Fryer leh nakhshad qurxoon oo is haysta oo leh muuqaal dhijitaal ah oo hawl badan leh oo kor ku yaal si loo xakameeyo hawlgalka.
8 habab hore loo diyaariyey oo dejiya wakhtiga iyo heerkulka loo baahan yahay si loo kariyo noocyada kala duwan ee cuntada. Waxay leedahay heerkulbeeg heerkulbeeg ah si uu u xakameeyo heerkulka 80 ° C ilaa 200 ° C. Waqtiga la isku hagaajin karo laga bilaabo 0 ilaa 30 daqiiqo.
Iyada oo la ilaalinayo kulaylka. Tilmaamaha hawlgalka iftiinka. Saldhig aan simbiriirixan lahayn si loogu roonaado taageeradeeda inta lagu jiro hawlgalka. Qabooji-taabashada daboolka iyo gacanta.
Awoodda: 2.5 litir
Qalabkani waxa uu ahaa kambanigii ugu horeeyey ee ay shirkadu gasho agabka guriga. laba heer oo daab wareeg ah. Waa model ku habboon kuwa doonaya isku mar kariyo laba cunto laakiin waxay leeyihiin miisaaniyad adag oo aan gaarin qalabka ugu qaalisan. Dhankeeda hoose ayaa ah in hadda si ficil ahaan ah loo iibiyo meel walba oo ay mudan tahay oo kaliya haddii aad hesho heshiis weyn.
Jikada Dhererka laba jibaaran
Xakamaynta Aasaasiga ah
Eeg Qiimaha Cecotec Compact Plus
Cunto -kariyaha cuntada u oggolaanaya in lagu kariyo hal qaaddo oo saliid ah, si loo gaaro natiijooyin caafimaad leh.
Natiijooyinka gaarka ah ee dhammaan cuntooyinka waxaa mahad leh farsamada hawada kulul ee PerfectCook. Waxay leedahay hawsha foornada iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dambiilaha lagu daray sida alaabta.
Waqtiga iyo heerkulka lagu diyaarin karo Kari ilaa 400 garaam oo baradho ah hal mar.
Waxay leedahay heerkulbeegga ilaa uu gaaro 200º. Waqtiga la hagaajin karo 0-30 min.
Weelka awoodda 1,5 litir. Waxay leedahay buug -kariye.
Awoodda: 1.5 litir
Waqtigan xaadirka ah inta badan warshadeeyayaasha waxay iibiyaan moodooyinka khaanadaha, laakiin nooca hawo-shiileeyaha faa'iido ayuu leeyahay iyaga ku saabsan. Halkan waxaan kuugu sheegaynaa midka ugu cajiibsan laakiin sidoo kale waad awoodaa Ka hel falanqaynta buuxda ee “walaasheeda ka weyn” xidhiidhkan: Cecotec Compact Plus
Nadiifi oo Fudud in la isticmaalo
Waa in aad ka saartaa cuntada
Tilmaamo Aad u Fudud
Cecotec ma tahay sumad shiilan oo aan saliid lahayn?
Hubaal inaad xasuusato in Cecotec loo bilaabay guul iyadoo ay ugu mahadcelinayso mid kale oo ka mid ah qalabka korantada ee aanu aadka u qadarinayno: nadiifiyaha faakuumka ee robotka. Shirkadan Valencian waxa ay sii wadday dariiqeeda hal-abuurnimo ee ay ku soo kordhisay badeecooyin kale oo badan oo had iyo jeer ku yaal qof kasta bushimihiisa. Markaa markii ay soo baxeen shiilan aan saliid lahayn, waa laga tagi waayay. Mid ka mid ah qodobada togan waa taas wuxuu leeyahay dhowr nooc oo shiilan, oo cabbirro iyo qiimayaal kala duwan leh si looga dhigo mid la awoodi karo qof walba.
Halka dhanka kale, ay sidoo kale ka go'an tahay fikradaha tignoolajiyada cusub iyo cunto caafimaad leh. Ka dhigista diyaarinta cunto qani ah oo qoyska oo dhan ah suurtagal daqiiqado gudahood iyo hal gujin. Sidaa darteed, haddii ay tahay inaan ka jawaabno su'aasha ah in Cecotec ay tahay sumad wanaagsan oo shiilan saliid la'aan ah, waxaan dhihi doonaa haa. Sababtoo ah waxay qiimo fiican u leeyihiin lacag taas oo had iyo jeer ah ikhtiyaarka ah in la tixgeliyo. Waxaad ku badbaadin doontaa wakhti iyo meel bannaan inta badan moodooyinkeeda, sidoo kale way fududahay in la isticmaalo mana iloobi karno inay isticmaalaan tamar yar marka loo eego fryers-ka caadiga ah ee aan dhammaanteen guriga ku haysanno.
Awoodda, waa run in ay ku kala duwanaan karto moodooyinka, laakiin dhammaantood waxay haystaan ​​​​ku filan si ay u awoodaan inay sameeyaan dhammaan cuntooyinka aad rabtay. Ma sameeyaan buuq badan natiijada karinta ayaa ka sii fiican. Sidaa darteed, waxaan eegnaa meesha aan eegno, Cecotec had iyo jeer waxay leedahay qiimeyn aad u wanaagsan. Horay ma u haysataa shiilanahaaga Cecotec?
Sida loo nadiifiyo shiilan saliid la'aanta Cecotec
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee noocan oo kale ah ayaa ah in adigoo isticmaalaya wax yar ama saliid, nadiifinta sidoo kale waa sahlan tahay. Mar haddii kuwa ku dheggan ama ka adag in meesha laga saaro wasakhdu ma dhegi doonaan. Sababtoo ah, Haddii aad la yaabban tahay sida loo nadiifiyo shiilan-la'aanta saliidda Cecotec, waxaanu kuu sheegaynaa inay tahay hab fudud. oo aad u dhaqso badan. Laakiin haa, waa in aan samaynaa maalin kasta oo aan isticmaalno, si aan u hubinno in aysan jirin nooc nasasho ah oo hadhay iyo in marka aan u baahanno mar kale ay noqon doonto mid aan qummanayn. Inaga oo ka duulayna, waxaynu raacaynaa tillaabooyin taxane ah oo runtii lama huraan ah:
Usa had iyo jeer alaabta dabiiciga ah ee nadiifinta, ama, alaabooyinka u gaarka ah nooca qalabka guriga.
Waanu ka furnaa shiilan oo hubinaa in ay gabi ahaanba qabow tahay, ka hor inta aanad bilaabin nadiifinta.
Bilow nadiifinta gudaha, ka saar dhammaan qaybaha la saari karo. Si loo yiraahdo gudaha, waxaan dhaafi doonaa maro qoyan, maro ama calal. Waxaan ku qaadan doonaa waqti fiican derbiyada shiilayadeena. Marka tallaabadan la qaado, waxaan ku qallajinnaa warqad jikada.
Dhanka kale, waxaan ku dhaqi doonaa dambiisha biyo diirran iyo saabuun khafiif ah ama weel. Waxa kale oo aad ku samayn kartaa adiga oo kaashanaya isbuunyo laakiin had iyo jeer jilicsan, adigoo ka fogaanaya waxyeellada dusha sare.
Diirada saar qaybta shabagga ee wasakhda ugu badan ay ku urursan karto. Hadday sidaas tahay, isticmaal buraash jilicsan oo jilicsan si aad si fudud uga saarto.
Si loo nadiifiyo dibadda ee shiilan, waxaan sidoo kale isticmaali doonaa maro qoyan ka dibna mid engegan si loo dhammeeyo.
Xusuusnow sidoo kale in haddii aad leedahay weel dhaqida, waxaad gelin kartaa dhammaan agabkiisa. Si aan sidoo kale u helno nadiifin sax ah, laakiin dhakhso leh, haddii ay suurtagal tahay.
Qiyaasta cecofry waa a mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran suuqa, oo leh moodallo ku filan oo lagu qanci karo dhammaan isticmaalayaasha. Buug-gacmeedkiisa waxaad ka heli doontaa qalab fudud oo si sahlan loo isticmaali karo ilaa noocyo aad u dhammaystiran oo casri ah, dhamaantoodna leh qiimo wanaagsan lacag.
Sifooyinka Wanaagsan / Qiimaha Qiimaha
2-sano damaanad Isbaanish ah
Suuqgeynta qaabka ugu dhameystiran
Brand leh khibrad
Si uu kaaga caawiyo inaad go'aansato waxaan cadeyneynaa shakiga ugu badan on fryers multifunction ee shirkadda Isbaanishka.
Waa maxay Cecofry?
Waa diintii laga soo bilaabo noocyada shiilan hawada kulul ee shirkadda Isbaanishka Cecotec, mid ka mid ah kuwa ugu caansan dalkeena.
Noocyada noocaas ah Waxay u kariyaan si la mid ah foornada, si ay si dhib leh u isticmaalaan saliid. Wax badan ka ogow annaga maqaal ku saabsan shaqeynaya.
✓ Bilawga ma la jadwalsan karaa?
Hadda kuma jiri karto calaamad kasta
Maxaad kari kartaa?
In kasta oo isticmaaleyaal badani ay u maleynayaan inay kaliya u adeegaan inay shiilaan baradhada ama baalasha digaagga oo leh saliid yar, waxaad karin kartaa noocyo kala duwan oo cunto ah. Iyadoo ku xiran qaabka aad doorato, xitaa waad sameyn kartaa kalluunka, bariiska, hilibka iyo xataa keega ama pizzas.
En xidhiidhkan waxaad haysataa cuntooyinka calaamad u gaar ah.
✓ Aad bay u qaylo badan yihiin?
Waxooga qaylo ah ayay sameeyaan taageerayaasha dartii, ku saabsan waxa microwave-ku uu samayn karo.
✓ Cuntadu ma tahay in la kiciyo?
Moodooyinka ugu aasaasiga ah waxaa lagula talinayaa in sidaas la sameeyo, Kuwa ugu dhammaystiran waxay keligood ku sameeyaan daab wareeg ah.
Halkee laga iibsan karaa kaaga?
Waxaad ka iibsan kartaa online at Amazon ama dukaanka in calaamad lafteedu leedahay. Labaduba waa la aaminay oo waxay leeyihiin dammaanad, hadaba dooro midka ugu wanagsan balse ha iloobin u fiirso agabka ay ku jiraan. Tilmaamahayaga waxaad ka heli doontaa xiriiriyeyaasha iibka ee labada dukaan si aad u barbardhigto qiimaha.
(Codadka: 31 Celcelis: 3.6)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Cecotec